हेमन्त चेम्जोङको ‘सिरीमा सिरी…’ (भिडियोसहित) – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
काठमाडौँ, ९ पुस, गायक हेमन्त चेम्जोङले नयाँ गीत लिएर आएका छन् । उनले ‘सिरीमा सिरी बतासै चल्यो…’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेका हुन् । यो गीतको शब्द के.के. खवास र गायक चेम्जोङले संयुक्त रुपमा लेखेका छन् भने संगीत के.के. खवासको हो । विश्व अधिकारीले गीतको एरेन्ज गरेका छन् । चेम्जोङले यो गीतलाई ‘भाव’ एल्बममा समावेश गरेका छन् ।
करिब १२ वर्षअघि ‘प्रभाव’ नामक एल्बम लिएर आएका चेम्जोङलाई अर्को गीत सार्वजनिक गर्न उन्यू फूल्ने समय कुर्नु पर्यो । ‘विकासे जागीर तिर लागेपछि गीत, संगीतमा निरन्तरता दिन सकिन’ गायक चेम्जोङ भन्छन् । साथीभाइ र शुभचिन्तकको आग्रह र आफ्नै रहरले पनि यति लामो समयपछि गीत गाउन जाँगर चलेको उनले सुनाए ।
आइतबार अनामनगरमा एक पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गर्दै गायक चेम्जोङले गीत गाउँदा र नगाउँदाका तिता–मीठा अनुभव सुनाए । ‘गीत, संगीतमा लागेर छोडेपछि पनि कता–कता आफ्ना शुभचिन्तक भने भइरहने रहेछन्’ उनी भन्छन्, ‘जसले आफ्नो रहरलाई गीत सार्वजनिक गर्नेसम्मको अवस्थामा ल्याइपुर्याउने रहेछ ।’ १२ वर्ष अघि र अहिलेको गीत गायन, संगीत संयोजन, एरेन्ज र प्रविधिले निक्कै फड्को मारिसकेको अनुभव उनले गरे । भन्छन्, ‘उ बेलाजस्तो रहेनछ अहिले, उर्जाशील नयाँ पुस्ता आइसकेछ, प्रविधि पनि नयाँ ।’ अब भने गीत, संगीतमा सकेसम्म निरन्तरता दिने उनको ध्येय छ ।
गीतको भिडियोलाई पाँचथरको चर्चित ठाउँ ‘साधुटार’ मा खिचिएको छ । निक्कै मनमोहक दृश्यमा कलाकारहरु सुप्रिया कटुवाल र रोविन विष्टले अभिनय गरेका छन् । यो भिडियोको निर्देशन, क्यामेरा र सम्पादनको सम्पूर्ण काम देवजंग थापाले गरेका हुन् ।
हेर्नुहोस् उक्त गीतको भिडियोः
प्रकाशित मिति: 2018-12-24 2018-12-24 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged गीत म्यूजिक भिडियो संगीत सुप्रिया कटुवाल
Tags: गीत, म्यूजिक भिडियो, संगीत, सुप्रिया कटुवाल